အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုမြို့တွင် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများပြပွဲကျင်းပခဲ့ - Xinhua News Agency
ကိုင်ရို၊ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အီဂျစ်နိုင်ငံက ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး နိုင်ငံတကာ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများပြပွဲ EDEX 2021 ကို နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံနှင့် ဒေသ စုစုပေါင်း ၄၂ ခုမှ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီပေါင်း ၄၀၀ ကျော် က ၎င်းတို့ ၏ နောက်ဆုံးပေါ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပြသခဲ့သည်။
မြို့တော်ကိုင်ရို၏ အရှေ့တောင်ဘက်စွန်းပိုင်းရှိ ကိုင်ရိုမြို့သစ်ရှိ အီဂျစ်နိုင်ငံတကာပြပွဲစင်တာ၌ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် အဆိုပါ ပြပွဲကို အီဂျစ်နိုင်ငံသမ္မတ Abdel-Fattah al-Sisi က ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
EDEX ပြပွဲကို အီဂျစ်နိုင်ငံ စစ်တပ်မှ အပြည့်အဝ ပံ့ပိုးပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး လာရောက်ပြသသူများကို မြေပြင်၊ ရေပြင်နှင့် ဝေဟင်သုံး နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများ၊ ကိရိယာများနှင့် စနစ်များကိုပြသနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခြင်းဖြစ်သည်။
အခမ်းအနား၌ အီဂျစ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး မိုဟာမက် ဇာကီ က
အဆိုပါပြပွဲသည် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် နောက်ဆုံးပေါ် ကာကွယ်ရေးစနစ်များနှင့် တပ်မတော်သုံးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ထားရှိမှုများကို အထောက်အကူပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ ထိန်းသိမ်းဖို့ ဆိုရင် အရည်အသွေးနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ လိုအပ်ပါတယ်” ဟု Zaki က ထောက်ပြခဲ့ပြီး ယခုကုန်စည်ပြပွဲသည် စစ်တပ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် နိုင်ငံများအကြား ကျွမ်းကျင်မှုဖလှယ်ရန် ပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။
China Electronics Corporation (CEC) ၏ တစ်ဦးတည်း ပိုင် လုပ်ငန်းခွဲ ELINC China Co., Ltd မှ စီးပွားရေးမန်နေဂျာ ဝမ်ရန် က “မိမိတို့ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ကြီးမားသည့် ပြပွဲတွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိခြင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ဝင်ရောက်ပြသနိုင်ခြင်းဟာအလွန်အရေးပါကြောင်း” ဆိုသည်။
ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများနှင့် စက်မှု လုပ်ငန်းများကို အထူးအသားပေးထုတ်လုပ်သည့် ELINC ကုမ္ပဏီက ခေတ်မီဆန်းသစ်သော ထုတ်ကုန်များနှင့် စနစ်များအပြင် ဆွေးနွေးမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အခြားဆက်စပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ အပါအဝင် နေ့စဉ်ဘဝ တွင်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည့် ပစ္စည်းများကိုလည်းထုတ်လုပ်ကြောင်း သိရသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း ၁၆၀ ကျော် နှင့် စီးပွားရေးချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်သည့် ဝမ်တို့ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်ဈေးကွက်သစ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမှာ ကြီးမားသည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။
ELINC ကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ စစ်ဘက်သုံး စက်မှုပစ္စည်းများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် အသိဉာဏ်နည်းပညာသုံး ကိရိယာများ တီထွင်ထုတ်လုပ်သည့် အဓိက platform လုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုဖြစ်သော တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းစက်မှု လုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO Group) က ယခု ပြပွဲတွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပါဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ပြပွဲတွင် ကုမ္ပဏီက အဆင့်မြင့် လက်နက်များနှင့် ကိရိယာစနစ်အမျိုးမျိုးကို ခင်းကျင်းပြသထားပြီး ၎င်းတို့ထဲတွင် သေနတ်များ၊ အသိဉာဏ်ထည့်သွင်းထားသော လက်နက်ခဲယမ်းများ၊ လေကြောင်းကာကွယ်ရေးနှင့် ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ်များ၊ စစ်ဘက်နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် လုံခြုံရေးနည်းလမ်းသစ်များကိုထည့်သွင်းပြသခဲ့သည်။
“မိမိတို့ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အီဂျစ်နိုင်ငံဈေးကွက်ထဲတွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် နက်ရှိုင်းစွာ ကျင်လည်ခဲ့ပြီး အီဂျစ်နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်လည်းရေရှည် ဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း” NORINCO လုပ်ငန်းစု ပြခန်းမန်နေဂျာကဆိုသည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အီဂျစ်နိုင်ငံ၏ ဒေသခံ ကာကွယ်ရေးလက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် နက်ရှိုင်းစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အီဂျစ်နိုင်ငံတို့အကြား စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်ကို ထပ်မံတိုးမြှင့်သွားရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားမည်ဟု ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။
စစ်တပ်အင်အား ၉၂၀,၀၀၀ ရှိသည့် အီဂျစ်နိုင်ငံတပ်မတော်သည် အာဖရိကတိုက်တွင် စစ်အင်အား အကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၀ တွင် စစ်အင်အားအကြီးမားဆုံးနိုင်ငံ အဆင့် ၁၃ တွင် ရှိကြောင်း Global Firepower Index 2021မှ ထုတ်ပြန်သည့်အချက်အလက်များအရ သိရသည်။
အလားတူ အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် သမိုင်းတလျှောက် ကာကွယ်ရေးဗျူဟာအဖြစ် နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်များတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည့်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး စစ်ဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာအဆင့်ဆင့် ၏လိုအပ်ချက်အလိုက် ပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်မှုများကို တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည့်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
Roundup: Egyptian int’l defense expo kicks off in Cairo
CAIRO, Nov. 29 (Xinhua) — Egypt held on Monday the second edition of its largest international defense expo, EDEX 2021, with more than 400 defense companies from 42 countries, including China, showcasing their up-to-date defense products.
Inaugurated by Egyptian President Abdel-Fattah al-Sisi, the expo will run from Nov. 29 to Dec.2at Egypt’s International Exhibition Centre in New Cairo,acity on the southeastern edge of the capital Cairo.
During the ceremony, Egypt’s Defence Minister Mohamed Zaki said that the event will enable manufacturing companies to feature defence systems and also the latest developments in military production.
“Peace needs potentials and capabilities to be protected and maintained,” Zaki pointed out, saying the expo has createdagathering to promote military development and exchange expertise between countries.
“It is important for our company to join the exhibition as it is our first time to participate in this big event,” said Wang Yan, business manager with ELINC China Co., Ltd,awholly-owned subsidiary of China Electronics Corporation (CEC).
Wang, whose company hasabusiness presence in more than 160 countries and regions all over the world, added the expo isagreat chance to openanew market for the company’s products in Egypt.
“Our company has been deeply involved in the Egyptian market for more than 20 years and isalong-term strategic partner of the Egyptian Ministry of Defense,” said the manager of NORINCO Group’s booth.
In addition, Egypt has historically maintained continuous investment in the latest weaponry asadefense strategy and has strengthened national production lines acrossarange of military complexes. Enditem